Ntughari ohuru nke Wolfram Asụsụ na Mathematica v12.1 dị njikere | Site na Linux
Ọchịchịrị | | Mmemme
Wolfram Research mara ọkwa na mwepụta nke ọhụrụ version nke asụsụ mmemme gị Asụsụ Wolfram na Wolfram Mathematica 12.1. Ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ ọhụrụ akọwapụtara na ntanetị site na onye okike Stephen Wolfram dị oke ma nwee ọtụtụ ihe.
Ọhụrụ a version 12.1 mmekorita nke Julia na R pụtara na nchikota nke asusu ndi ozo, nke putara na ikike nke sistemu a kwesiri ka inweta ya karia.
E wezụga ya kwuru na ndị ọrụ na-eji nkwụnye ego ntanetị na ntanetị oge niile tungsten ha ga-achọta ụdị netwọk 25 ọhụrụ, gụnyere usoro nnọchi anya asụsụ BERT ama ama na usoro ntụgharị nke usoro ọmụmụ eji eme ihe 2 maka usoro ọgbọ ederede.
Usoro ugbu a ọ na-abịa na akara ngosi NetGANOperator na nhọrọ TrainingUpdateSchedule, nke ezubere, dịka ọmụmaatụ, iji mee ka ọrụ NetTrain izugbe na Wolfram rụọ ọrụ na netwọkụ ọmụmụ na-emegiderịta onwe ha dị ka ndị a na-ejikarị eme ihe na mmụta na-enweghị nlekọta ma ọ bụ ikike.
“Na mbipute 12.1, anyị tinyere Julia, Ruby, na R na nchịkọta nke asụsụ ndị ọzọ. N'ezie, enwere ụdị nsogbu dị iche iche. Anyị kwesịrị ijide n'aka na e nwere nrụnye kwesịrị ekwesị na kọmputa onye ọrụ yana na ụdị data ejiri na mmemme nwere ike ịtụgharị gaa n'asụsụ Wolfram
"Ọ bụ n'ezie ihe bara uru ... Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta ọrụ na asụsụ mpụga, nke a na-anọchi anya ya n'ụzọ ihe atụ na Wolfram Asụsụ dị ka ihe ExternalFunction na, mgbe akpọrọ ya, ọ na-eme koodu ahụ na asụsụ mpụga"
Ndị ọzọ karịa na, na ibubata ihe mmekorita nke uzo ohuru kwesịrị ịdịtụ mfe n’ọdịnihu, ebe ọ bụ na ụdị nke 12.1 ugbu a na-akwado ONNX, usoro a na-emeghe maka ịnọchite anya usoro mmụta igwe. Ndị na-arụ ọrụ nhazi ihe onyonyo na-enweta enyemaka ọzọ na mgbakwunye dị ka FindImageText, nke na-achọpụta ederede na onyonyo ma kaa ya akara, ebe ndị na-ege ntị ga-eji SpeechInterpreter na SpeechCases mee ihe.
Ndi otu Wolfram usoro data gbanwetụrụ. Ndị ọrụ ga-enwe ọ toụ ịmara nke ahụ ugbu a nwere ike ịtọ ndabere ụkpụrụ maka ọnụ ọgụgụ nke e nyere ahịrị na ogidi a ga-egosiputa ma nwezie ike ijikwa ngosipụta nke dataset.
A na-echekwa data karịrị ihe a pụrụ ịhụ na laptọọpụ na laptọọpụ na ụdị nke ọhụrụ ahụ, nke pụtara na ọ ga-enweta ya mgbe ọ bụla emegharịrị ya. Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ijide data abụọ enwere ma lelee ya site na iji ọrụ ọrụ TableView.
Na mbipute 12.1, nchịkọta aghọwo akụkụ akwadoro nke asụsụ Wolfram.
Wolfram n'onwe ya kọwara ha na okwu mmeghe ya dị ka ngwungwu modulu nke koodu yana akụrụngwa ndị ọzọ iji nye ọrụ.
“A paclet nwere ike hazi koodu na-agba ọsọ na buut oge. Nwere ike kọwaa akara ngosi nke nkọwapụta ya ga-aka na-akpaghị aka. O nwere ike iwunye akwụkwọ. Nwere ike itinye ihe na menu. Na mkpokọta, ị nwere ike hazi ihe eji eme ihe na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla dị mgbagwoju anya nke sistemụ asụsụ Wolfram.
Ọdịdị nke paclet faịlụ nwere "akụ ma ọ bụ akụ nke ụdị dị iche iche, yana faịlụ pụrụ iche PacletInfo.wl nke na-akọwa otú a ga-esi tinye paclet n'ime sistemụ Wolfram."
Ma ebe ọ bụ na a na-ekesa ngwungwu na otu faịlụ abịakọtara, ha dị mfe ịkekọrịta, yabụ isi okwu nke ịkpọtụrụ iji mee nke ahụ adịlarị na ọrụ ma ọ ga-adị n'oge na-adịghị anya.
Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ebe nchekwa ọrụ na-echekwa usoro na usoro nke asụsụ ahụ, ebe nchekwa Paclet agaghị eme ya ma hụ ya dị ka ụzọ isi kesaa gburugburu ebe niile maka ọrụ ụfọdụ.
Nke a bụ akụkụ nke mgbanwe niile na-gụnyere na nke a ọhụrụ version, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata zuru ndepụta ị nwere ike ịkpọ ndị nkọwa na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » Depụta ụdị nke Wolfram Asụsụ na Mathematica v12.1
Enweelarịrị Postfix 3.5.0 ma ndị a bụ mgbanwe ya